फ्रान्सबाट फर्किएकी युवतीमा कोरोना : विदेशी साथीलाई संक्रमण देखिएपछि परीक्षण- समाचार - कान्तिपुर समाचार
परिवारका सदस्यहरू क्वारेन्टाइनमा, विमानमा सवार अन्य यात्रुको स्थितिको खोजबिन हुँदै
चैत्र ११, २०७६ स्वरूप आचार्य, जनकराज सापकोटा
काठमाडौँ — गत मंगलबार फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै आएको क्युआर ६५२ कल साइनको कतार एयरवेजमा क्रु मेम्बरबाहेक दुई जर्मन, एक फ्रेञ्च र अरु नेपालीगरि १ सय ५८ यात्रु थिए । यिनै यात्रुमध्येकी एक थिइन्, फ्रान्समा अध्ययनरत काठमाडौं घर भएकी १९ वर्षीया युवती । उनी काठमाडौं ओर्लेको ६ दिनपछि सोमबार स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यिनै युवतीमा कोरोनाको संक्रमणको पुष्टि भएको बताए ।
संक्रमणको पुष्टि भएसँगै ती युवतीसँगै यात्रा गरेका यात्रुहरू र उनको सम्पर्कमा आएका अध्यागमन कर्मचारीहरू को–को थिए भन्ने प्रश्न उठेको छ । साथै ती अन्य यात्रु र अध्यागमन कर्मचारीमा पनि संक्रमण फैलियो वा फैलिएन भनेर खोजी गर्नुपर्ने देखिएको छ । काठमाडौं अवतरण गरेको चौथो दिन ती युवतीले शुक्रबार टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा गएर स्वास्थ्य परीक्षण गराएकी थिइन् । आइतबार नै उनको परीक्षण रिपोर्टमा कोभिड–१९को संक्रमण रहेको पुष्टि भएपछि अस्पतालले यसबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो । मन्त्रालयले भने यसको सूचना प्रधानमन्त्रीलाई आइतबार राति नै दिएको थियो ।
सञ्चारकर्मीले खचाखच बैठक कक्षमा बोल्दै मन्त्री ढकालले ती युवतीका परिवारका सदस्यहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राखिएको जानकारी दिए । तर संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका परिवारबाहेकका व्यक्ति र युवती आएको विमानका अन्य यात्रुहरूको पहिचान गर्ने र तिनलाई पनि आइसोलेसनमा राखेर निगरानी गर्नुपर्ने काम सोमबार साँझसम्म पनि औपचारिक रूपमा गरिएको छैन । कतिसम्म भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि विमानको कल साइन र उक्त विमानमार्फत कति यात्रुले यात्रा गरेका थिए र ती यात्रुले अब के गर्नुपर्छ भन्नेबारे केही बताइएन । न त उक्त विमानका यात्रुहरूलाई नै सरकारी सम्पर्कमा आउन आह्वान गरियो ।
बरु पत्रकार सम्मेलन सकिएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमार्फत फरक कल साइन भएको कतार एयरवेजकै विमानको तस्बिर राखेर ‘यो विमानमा चढेर आउने यात्रुहरूले तुरुन्त स्वास्थ्य जाँच गर्नुहोला’ भन्ने सन्देश छोडिएको छ । यस्तो सन्देश तीव्र गतिमा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको देखिन्छ । संक्रमित यात्रु चढेर आएभन्दा फरक विमानको तस्बिर र जानकारी राखेर सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको आह्वानले गलत सन्देश फैलाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले फ्रान्सबाट फर्किएपछि युवती होम क्वारेन्टाइनमा रहेको र शुक्रबार केही शंका लागेपछि परीक्षण गराएको बताए । उनले संक्रमण पुष्टि भएपछि युवतीलाई उहाँलाई अस्पतालमा नै आइसोलेट गरेर राखिएको बताउँदै भने, ‘उनको परिवारलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न भनिएको छ । र, साथै उनको सम्पर्कमा आएका अन्य व्यक्तिको पनि पहिचान गरेर अनुगमन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएका छौं ।’
मंगलबार १०ः१२ बजे काठमाडौं अवतरण गरेको उक्त विमानका अन्य यात्रुहरूमा समेत संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिम देखिन्छ । अध्यागमन स्रोतका अनुसार उक्त दिन आएका यात्रुहरूमध्ये धेरैजसो वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकामध्ये मधेसका छन् । संक्रमित युवती र अन्य सहयात्रीको राहदानीमा आगमन छाप हान्ने काममा खटिएका अध्यागमन कर्मचारीमा पनि संक्रमणको जोखिम देखिन सक्छ । उक्त दिन अध्यागमनमा आगमन कक्षमा खटिएका केही अध्यागमन अधिकृतले संक्रमणको पुष्टि भइसक्दा पनि साँझसम्म आफूहरूले के गर्नुपर्ने हो भन्नेबारे विभागबाट आधिकारिक जानकारी आइनसकेको बताए ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारीका अनुसार संक्रमित युवतीलाई भियतनाममा रहेका एक मित्रले आफूलाई कोभिड–१९ को संक्रमण देखिएको जानकारी दिँदै परीक्षण गराउन सुझाव दिएका थिए ।
‘फ्रान्सबाट कतारको दोहासम्म सँगै आएको भियतनामी साथीले फोन गरेर उसलाई संक्रमण रहेको बताएपछि परिवारका सदस्यले उनलाई अस्पताल ल्याएका हुन्,’ डा. राजभण्डारीले भने, ‘अस्पताल आउँदा उनले मास्क र पन्जा सबै लगाएकी थिइन् । हामीले भित्री घाँटीबाट नमुना संकलन गर्‍यौं र आइसोलेसनमा बस्न भनेर घर फिर्ता पठायौं । आइतबार परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि भने अस्पतालमा नै भर्ना गरेर राखेका छौं ।’
डा. राजभण्डारीका अनुसार ती युवतीले आफू संक्रमण फैलिएको देशबाट आएको डरका कारण विमान र विमानस्थलमा समेत मास्क र पन्जा नै लगाएर बसेकी थिइन् । यस्तै उनी सकेसम्म कम मानिसहरूको मात्रै सम्पर्कमा आउने कोसिस गरेको परिवारका सदस्यलाई बताएकी छन् । ‘पढेलेखेको मान्छे । उनलाई पनि डर भएर होला आउँदादेखि नै मास्क र पन्जा लगाउन छाडेको छैन भन्ने परिवारले दाबी गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तै उनले घरमा पनि क्वारेन्टाइनका नियमहरूको राम्रोसँग पालना गरेको परिवारले जानकारी दिएको छ ।’ उनको परिवारका चार सदस्य र एक सहयोगी छन् ।
डा. राजभण्डारीका अनुसार हाल अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर निगरानी गरिरहे पनि उनमा संक्रमणका थोरै मात्र लक्षण देखिएको छ । उनले संक्रमित युवतीको परिवारका परिवारका सदस्यलाई भने हालसम्म संक्रमणको कुनै लक्षण नदेखिएको बताउँदै भने, ‘हामीले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखालाई परिवारको सदस्यलाई पनि निगरानीमा राखेर परीक्षण गर्न सिफारिस गरेका छौं ।’
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ढकालका साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले समेत ती युवतीको सम्पर्कमा आएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको दाबी गरेका थिए । मन्त्री र प्रवक्ताले यस्तो दाबी गरे पनि उक्त विमानमा रहेका सबै यात्रु होम क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् वा छैनन् भनेर अनुगमन गर्ने संयन्त्र भने मन्त्रालयसँग देखिन्न ।
मंगलबारदेखि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमित देशबाट फर्कनेहरूलाई विमानस्थलमै ‘होम क्वारेन्टाइन’ मा बस्छु भनेर लेखिएको कागजमा आफ्नो विस्तृत विवरण भरी हस्ताक्षर गर्न लगाएको थियो । अनिवार्य गरिएको यस्तो डिक्लरेसन फाटरममा भएको विवरणका आधारमा ती यात्रुहरूको पहिचान र ठेगाना प्राप्त भने गर्न सक्ने सम्भावना भए पनि सोमबार साँझसम्म ती यात्रुहरूको अवस्था बुझ्ने काम भएको छैन । उक्त विमानमा सवार कति यात्रु ती युवतीसँग सम्पर्कमा रहे, तिनले विमानभित्रको शौचालय प्रयोग गरिन् कि गरिनन्, शौचालय प्रयोग गरेको भए त्यसपछि कति जनाले शौचालय प्रयोग गरे जस्ता विषयले पनि उनले कति जनालाई संक्रमित पारिन् भन्ने दायरा फराकिलो हुँदै जान्छ ।
कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख रवीन्द्र पौडेलले संक्रमणको जोखिम विमानस्थल अध्यागमनका कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पनि हुन सक्ने भएकाले ती कर्मचारीको पहिचान भयो भन्ने विषयमा खुल्न चाहेनन् । उनले सूचना अधिकारी राजेश पन्थीसँग यसबारेमा बुझ्न अह्राए । कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका पन्थीले भने आफू तीन दिन बिदा बसेर आजमात्रै कार्यालय आएकाले यसबारे केही जानकारी नभएको बताए । उनले कतार हुँदै आएको यात्रुमा कोरोना संक्रमण देखिएको कुरा सुनेपछि यसबारेमा आधिकारिक जानकारी नआएकाले यसै भन्न नसकिने भन्दै तर्किए । उनले भने, ‘मैले त संक्रमितको नाम पनि थाहा पाएको छैन । फेरि सूचना अधिकारी भन्दैमा सबै कुरा थाहा भइहाल्छ भन्ने पनि हुँदैन ।’
विमानस्थलमा खटिने अध्यागमन कर्मचारीहरूको सिफ्टअनुसारको नामावलीको डिजिटल रेकर्ड नै हुन्छ । जसका आधारमा विमान अवतरण भएको समयमा कुन यात्रुको राहदानीमा कुन कर्मचारीले छाप हानेका हुन् भन्ने सजिलै थाहा हुन्छ । अध्यागमनका विभिन्न स्रोतबाट कान्तिपुरलाई संक्रमित युवतीको राहदानीमा छाप हान्ने कर्मचारीको विवरण प्राप्त भएको छ । तर ती अधिकृत उक्त दिनपछि कति व्यक्तिको सम्पर्कमा रहे ? उनमा संक्रमणको कुनै लक्षण देखिएको छ कि छैन भन्नेबारे भने थाहा हुन सकेन ।
स्रोतका अनुसार अध्यागमन विभागले अनौपचारिक रूपमा संक्रमित युवतीको राहदानीमा छाप हान्ने काममा खटिएका अधिकृतलाई घरमै आइसोलेसनमा बस्न र कुनै स्वास्थ्य समस्या देखिए जाँच गर्न जानकारी दिइसकेको छ । तर उक्त बिहानको सिफ्टमा आगमन कक्षमा खटिएका अन्य अध्यागमन अधिकृतलाई भने विभागले के गर्ने भन्नेबारे कुनै जानकारी दिएको छैन ।
संक्रमित पहिचान भएका व्यक्तिसँग सम्पर्कमा रहेकाहरूको पहिचान छिटोभन्दा छिटो गरेर उनीहरूलाई अलग्याएर राख्ने र तिनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण समयमै नगर्दा संक्रमणको जोखिम व्यापक हुने देखिन्छ । जस्तो कि छिमेकी भारतकै एउटा घटना हेरौं– फेब्रुअरी १९ मा १९ वर्षीय छोरासँग साउदी अरब पुगेकी एक भारतीय महिला मार्च १० मा दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिन् । घर फर्केको दुई दिनपछि ज्वरो र कफ देखिएपछि उनले स्थानीय चिकित्सकलाई देखाइन् । अनि फर्केको पाँचौं दिन अर्थात् मार्च १५ मा उनले अझै निको नभएपछि स्थानीय अस्पतालमा जाँच गराइन् । चिकित्सकहरूले उनलाई मार्च १७ मा अर्को अस्पतालमा रिफर गरिदिए । जहाँ उनलाई कोभिड–१९ को संक्रमण भएको पुष्टि भयो । टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार यी महिलाबाट विमानस्थल लिन गएका भाइ, दुई छोरी र आमामा संक्रमण फैलिएको पुष्टि भयो । चिकित्सकहरूले ती महिलाका श्रीमान् र छोरामा पनि संक्रमणको जोखिम रहेको र अरूमा नफैलियोस् भनेर आइसोलेसनमा राखिएको छ ।
स्थानीय अधिकारीहरूले ती महिला बस्ने घर छेउछाउका ७४ जनामाथि पनि निगरानी राखेको छ । महिलासँग भेटघाटपछि उत्तरपूर्वी दिल्लीस्थित घर फर्केका भाइ र आमाले अरू धेरै जनासँग भेट गरिसकेकाले उनीहरूको पनि पहिचान र खोजी सुरु गरिएको छ ।
प्रकाशित : चैत्र ११, २०७६ ०६:५३
आजदेखि एक साता मुलुक बन्द
के बन्द के खुला ?
चैत्र ११, २०७६ दुर्गा खनाल, बिनु सुवेदी
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वको ‘कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ को सोमबार बसेको बैठकले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अत्यावश्यकबाहेक सम्पूर्ण गतिविधि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले जारी गरेको आदेशअनुसार मंगलबार बिहान ६ बजेदेखि औषधि उपचार, खाद्यवस्तु खरिदजस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्कन पाउने छैनन् ।
अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सबै सवारी बन्द हुनेछन् । आन्तरिक हवाई उडान पनि बन्द हुनेछन् । यसअघि सरकारले सोमबारदेखि एक साताका लागि अन्य छिमेकी दुई मुलुकसँग जोडिएका सबै नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्नेबाहेक सबै प्रकारका सार्वजनिक, निजी र यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालनमा अब पूर्णतः रोक लागेको छ । अत्यावश्यक सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनले स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । अत्यावश्यक सेवाबाहेक कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारीबाहेक सबैलाई बिदा दिने निर्णय भएको छ । सरकारी बिदा पाउने कर्मचारीलाई आवश्यक परेका बेला तत्काल उपस्थित हुने गरी कार्यालय प्रमुखले बिदा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, विद्युत्, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, फोहोरमैला व्यवस्थापनजस्ता अति आवश्यक सेवाका कर्मचारीले भने बिदा पाउने छैनन् । सरकारले औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, इन्धन उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिक कर्मचारीलाई सम्बन्धित उद्योगले बिदा दिनुपर्नेछ ।
आंशिक खालको बन्दले जोखिम न्यूनीकरण नहुने भन्दै बाहिरबाट पनि सरकारलाई सम्पूर्ण बन्दको दबाब परेको थियो । केही स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै सोमबार दिउँसैदेखि कर्फ्यु आदेश र सबै गतिविधि बन्द गर्नेजस्ता सूचना पनि जारी गरेका थिए । तल्लो तहबाट पनि दबाब बढेपछि उच्चस्तरीय समन्वय समितिअन्तर्गत बनेका मन्त्रीस्तरीय कार्यदलहरूको छलफल भएको थियो । त्यसपछि साँझ बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले सम्भावित जोखिमको मात्राबारे समीक्षा गरेको थियो । सम्पूर्ण गतिविधि बन्द नगर्दा जोखिमको अवस्था झन् बढ्ने निष्कर्ष निस्केपछि समितिले साँझ आदेश जारी गरेको हो । अन्य मुलुकमा संक्रमण बढिरहेको र नेपालमा पनि संख्या थपिएको अवस्थामा कुनै पनि बेला स्थिति जटिल बन्न सक्ने मूल्यांकन समितिले ठहर गरेको छ । त्यसैले तत्काल आदेश जारी गरी केही दिन मानिसको गतिविधि रोक्ने निर्णय भएको हो ।
सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि चरणबद्ध निर्णय गर्दै आएको छ । ‘स्थिति हरेक दिन बदलिएकाले जोखिम मूल्यांकन गरेर निर्णयहरू त्यहीअनुसार गर्दै जानुपर्ने अवस्था आएको हो,’ उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले पनि सम्भावित जोखिमहरू मूल्यांकन गर्दै सावधानीका लागि आवश्यक आदेशहरू जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उच्चस्तरीय समितिले सोमबार पूर्वाधार तयार गर्ने क्रममा मुलुकभरका क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृति गरेको छ । त्यस्तै कोरोना उपचारका लागि मात्र भनेर छुट्याइएको सशस्त्र प्रहरीको बलम्बुस्थित अस्पताल नेपाली सेनाको समन्वयमा चल्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली सेनाको समन्वयमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र आवश्यकताअनुसार सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रका चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी परिचालित हुनेछन् । यसका लागि रक्षा, गृह, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयले समन्वय गरी काम गर्नेछन् ।
आदेश उल्लंघन गरे के हुन्छ ?
उक्त ऐनअनुसार जारी भएको आदेश पालना नगर्नेलाई सीडीओमार्फत कारबाही हुनेछ । आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्तिउपर १ महिनासम्म कैद वा १००।– सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । आदेश कार्यान्वयन गर्ने अधिकृत व्यक्तिहरूलाई काममा बाधा पुर्‍याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा छ सयसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
अनुमति प्राप्त सवारी साधन, सुरक्षा निकाय, प्रेसका गाडी । स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, विद्युत्, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार क्वारेन्टाइन, फोहोरमैला व्यवस्थापन औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण ढुवानी, उत्पादनसँग सम्बन्धित सेवा र कार्यालय ।
आवतजावत, सबै सवारी साधन, हवाई उडान, अत्यावश्यकबाहेकका सरकारी/निजी कार्यालय, उद्योगधन्दा, अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सामान बिक्री गर्ने पसल, स्टोर ।
प्रकाशित : चैत्र ११, २०७६ ०६:४२